13 Ooievaarkii waa yimid - Ku soo dhowow Nederland
Marka Ilmo dhasho
Marka qoyska cunnug u dhasho aad bay u farxaan. Badanaa waalidku qol bay ilmaha yar u sii diyaariyaan inta aanu dhalan ka hor, qolkaasoo uu yaalo sariir yar oo luugu talo galay cunnugga. Maalmaha hore hooyada waa la nasiyaa, si ay uga soo kabato fooshii. Waxaa hooyadda loo sameeyaa 'kraamhulp' ama dad caawiya wakhtigan. Aabahana sidoo kale dhowr maalmood oo fasax ah ayaa la siiyaa, si uu xaaskiisa u caawiyo. Dabadeedna si dhakhso ah ayaa khaadh loogu diraa qaraabada iyo asxaabta reerka, kaadhkaasoo loo yaqaano 'gaboortekaartje' ama 'kaadhkii dhalashada'. Kaadhkan waxaa dadka loogu sheegaa inuu cunnug dhashay iyo magaca cunnugga. Marmarka qaarkoodna miisaanka ilmaha ayaa lagu sheegaa. Dadkana waxaa lagu casuumaa inay soo booqdaan.
Qaraabadu ilmaha yar way soo booqan karaan oo daawan karaan. Dabadeedna waxaa yimaada asxaabta kale. Haddii aanay dadku weli ogayn, waxay is weydiiyaan su'aasha ah: 'Waa maxay? Ma wiil mise gabadh'? Nederland wiilasha iyo gabdhuhu waa isku qiimo. Dabadeedna waxay kaloo dadku is badanaa is weydiiyaan: 'Magacii/Magaceed'? Badanaa mid kamid ah ayaa ayeeyooyinka ama awowyada ayaa cunnugga magac u sii bixiya, laakiinse aakhirka waalidka ayaa doorta magaca ay ka helaan.
Rose mise Buluug
Marmarka qaarkood dadku calanka Nederland ayay guriga hortiisa sudhaan, amase calamo yar yar ayay safaan. Midabka la isticmaalo ayay dadku ka gartaan in wiil ama gabadhi dhalatay. Hadday gabadhi dhalatay waxaa la isticmaalaa rose, haddii wiil dhashayna buluug. Markay dadku soo booqdaan waxaa la siiyaa buskud lagu korshubay muisjes. Haddii ilmaha dhashay wiil yahay midabka muisjes-ka waa cadaan iyo buluug, haddii ay gabadh tahayna waa rose. Tani waa dhaqan Nederland lagu yaqaano. 'Muisjes'-ka buskudka lagaga shubo waxay ka waa 'anijzaadjes' dusha sonkor laga mariyey.
Nederland iyo Vlaanderen waxaa ka jira dhaqan ah in marka ilmo dhasho sawir boombalo ah oo shimbirta Ooievaar-ka la yidhaahdo ah guriga hortiisa la dhigo. Tanoo ku salaysan sheeko dhaqameed sheegaysa in cunnugga shimbirtaasi keentay. Meesha sheekadani ka timid lama hubo. Laga yaabee inay tan ku salaysan tahay maadaama berigii hore ay shimbirtan Ooievaarka la yidhaahdo guryaha Nederland korkooda ugxanteeda dhigan jirtey. Sheekadu waxay leedahay dhagaxa qiiqu ka baxo ayay shimbirtani ilmaha ka soo dusisaa. Sheekadan ciyaalka kale ayaa waalidku u sheegaan marka ay weydiiyaan meesha ilmaha yar yar ee dhashaa ka yimaadeen